यस वर्ष क्यालिफोर्निया आगो मौसम हो? - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > यस वर्ष क्यालिफोर्निया आगो मौसम हो?
पीक जोखिम टाइम्स
धेरै व्यक्ति गलत रूपमा विश्वास गर्छन् कि अग्लो मौसम theतु तातो गर्मी को समयमा हुन्छ। लोकप्रिय धारणाको विपरित, तथापि, सेप्टेम्बर र अक्टुबर वन्य आगोको लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण महीनाहरू हुन्, जुन अग्लो मौसमको मौसम जुलाई-अक्टुबरदेखि चल्दछ। राज्यभरि सुक्ने, कडा बतासका कारण शरद monthsतु महिना जंगली आगोको लागि अति संवेदनशील हुन्छ। थप रूपमा, जब जुलाईमा अधिक आगो लाग्न सक्छ, यी आगोले सामान्यतया कम क्षति निम्त्याउँछ जब एकल जलेको विचार गर्दा। तातो र सुख्खा गर्मीको तापक्रम पछि थोरै नै वर्षा हुन्छ र सुक्खा वनस्पतिमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ, जसले सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा बढी विनाशकारी आगो निम्त्याउँछ।
क्यालिफोर्नियाको वन तथा अग्नि सुरक्षा विभागको अनुसार २० क्यालिफोर्निया इतिहासमा सबैभन्दा विनाशकारी वन्य आगो, ती मध्ये १२ सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा भयो। यी आगो नापा भ्यालीदेखि सान डिएगोसम्मै भयो। यो निष्कर्षमा पुग्न सुरक्षित छ कि दुबै उत्तरी र दक्षिणी क्यालिफोर्निया यी महिनाहरूमा वन्य आगोको लागि अति संवेदनशील छन्।
कहिले आगोको मौसम समाप्त हुन्छ?
शरद orतु वा जाडोको पहिलो उल्लेख्य वर्षाले क्यालिफोर्नियामा आगोको मौसमको अन्त्य बारे ल्याउँछ। यद्यपि, भर्खरका वर्षहरूमा शरद precतुमा ढिलाइ भएको छ। जसरी हामीले छोयौं, बढ्दो तापक्रमले सुख्खा वनस्पतिमा योगदान पुर्‍याउँछ, जंगलमा आगोको लागि ईन्धन स्रोतहरू अझ सजीलो रूपमा उपलब्ध हुन्छन्। जब शरद decreasedतुमा कमी आएको संग जोडी बनाइन्छ, क्यालिफोर्नियाको नयाँ आगो मौसम मौसममा राम्रोसँग फैलन्छ।
क्यालिफोर्निया जंगल आगोको गतिविधि को इतिहास अध्ययन गरेर, हामी विस्तार मौसम को प्रवृत्ति देख्दछौं। वन्यजन्तुहरू अब जनवरीको रूपमा र डिसेम्बर रूपमा ढिला भइरहेको छ। केहि राज्य द्वारा हाइलाइट सब भन्दा भर्खरको र विनाशकारी जंगल आगो, जस्तै थोमा २०१ Fire डिसेम्बरको फायर, धेरै विज्ञहरू सहमत छन् कि वर्षभरि आगोको मौसम नयाँ नियम हो।
२०१ Fire आगो मौसम: जनवरी २२ देखि नोभेम्बर २ 22 सम्म
कुल वाइल्डल्याण्ड आगो घटनाहरू: 3,672
जलेको एकरको संख्या: 114,473
गम्भीर महिना: जुलाई २०१ मा यस बर्ष सबैभन्दा बढी घटनाहरू भएको थियो। यो महीना पनि थियो जसमा सबैभन्दा बढी जलाइएको एकड़ थियो।
२०१ Fire आगो मौसम: जनवरी through देखि अक्टुबर १२ सम्म
कुल वाइल्डल्याण्ड आगो घटनाहरू: 2,920
जलेको एकरको संख्या: 163,067
गम्भीर महिना: जुलाई २०१ मा घटनाको सबैभन्दा बढी संख्या आयोजित गरिएको थियो। सेप्टेम्बर जलेको एकडको संख्या सबैभन्दा बढी हो।
२०१ Fire फायर सीजन: फेब्रुअरी through देखि डिसेम्बर २6सम्म
कुल वाइल्डल्याण्ड आगो घटनाहरू: 3,231
जलेको एकरको संख्या: 291,282
गम्भीर महिना: जुलाई २०१ मा घटनाको सबैभन्दा बढी संख्यामा आयोजन गरियो। सेप्टेम्बर जलेको एकडको संख्या सबैभन्दा बढी हो।
२०१ Fire आगो मौसम: मे २२ देखि नोभेम्बर २। सम्म
कुल वाइल्डल्याण्ड आगो घटनाहरू: 2,816
जलेको एकरको संख्या: 244,556
२०१ Fire आगो मौसम: अप्रिल २० देखि डिसेम्बर १ 20 सम्म
कुल वाइल्डल्याण्ड आगो घटनाहरू: 3,470
जलेको एकरको संख्या: 467,497
गम्भीर महिना: जुलाई २०१ मा घटनाको सबैभन्दा बढी संख्या आयोजित गरिएको थियो। अक्टूबरमा जलेको एकड़को संख्या सबैभन्दा बढी हो।
माथी सूचीबद्ध सबै जंगल आगोको गतिविधि बाट हो क्यालिफोर्निया वन र आगो संरक्षण विभाग। सबै तथ्याics्कहरूले केवल ठूलो मात्रामा आगो समावेश गर्दछ जसको परिणामस्वरूप 300 एकड क्षति वा अधिक भयो।
दक्षिणी बनाम उत्तरी क्यालिफोर्नियामा फायर सीजन
मौसम ट्रेंड सान्ता बार्बराको बलौटे समुद्री किनारदेखि Sonoma को पहाडी दाखबारीहरूमा भिन्न हुन्छ। जस्तो कि मान्न सकिन्छ, यी अनौठो गुणहरूले दक्षिणी क्यालिफोर्निया र उत्तरी क्यालिफोर्नियाका बासिन्दाहरूको लागि भिन्न अग्नि मौसमहरू सिर्जना गर्दछ।
प्रत्येक क्षेत्रको पहिलो महत्त्वपूर्ण वर्षा यसको आगो मौसमको विशिष्ट अन्त हो:
दक्षिणी क्यालिफोर्निया: दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा, पहिलो महत्त्वपूर्ण वर्षा सामान्यतया नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा हुन्छ। यसको मतलब दक्षिणी क्यालिफोर्निया आगोको मौसम उत्तरी क्यालिफोर्निया भन्दा औसतमा अलि लामो समय सम्म रहन सक्छ।
उत्तरी क्यालिफोर्निया: अर्कोतर्फ, उत्तरी क्यालिफोर्नियाका बासिन्दाहरूले अक्टोबरमा आफ्नो पहिलो वर्षाको आशा गर्न सक्छन्। यसको मतलब उत्तरी क्यालिफोर्निया आगोको मौसम दक्षिणी क्यालिफोर्निया भन्दा औसतमा केही छोटो हुन सक्छ।
क्यालिफोर्निया वाइल्डफायरहरूको लागि जोखिम कारक
यद्यपि जोखिम कारक दक्षिणी क्यालिफोर्निया विरूद्ध उत्तर उत्तरी क्यालिफोर्नियामा फरक हुन सक्दछ, वन्य अग्निहरू राज्य भर बिहीन फैलिन्छन्। राज्यको अनौंठो मौसम हावाको मौसम अपरिहार्य हुनुको मुख्य कारण हो। यद्यपि, क्यालिफोर्निया आगोको मौसममा योगदान पुर्‍याउने जोखिम कारकहरूमा पनि मानवहरूले भूमिका खेल्छन्। यहाँ तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ:
सान्ता अना पवनहरू
सान्ता अना हावाहरू सामान्यतया प्रति घण्टा miles० माईलको गति हुन्छ। केहि अवस्थाहरूमा, यी वायुहरूले तूफानको ताकतमा पुग्न सक्छन्, प्रति घण्टा 40 74 माईलसम्म र hour 85 माईल प्रति घण्टासम्म पुग्न सक्छ। सान्टा एना वायुहरू आगोमा परेको फ्या effectsनिंग प्रभावहरूको कारण क्यालिफोर्नियामा वन्य आगोका लागि कुख्यात कारक हुन्। थप रूपमा, यी हावाहरूले असाधारण दूरीका लागि इम्बरहरू बोक्न सक्दछन्। यद्यपि क्यालिफोर्नियामा यी बतासहरू आउनु अघि शरद rainतुको वर्षा राम्रोसँग हुन्छ, बर्षौंको मौसममा, ओसिलो मौसममा बढ्दो ढिलाइ भएको छ।
बढ्दो तापमान र मौसम परिवर्तन क्यालिफोर्निया राज्य भरमा बढ्दो जंगलको जोखिमको लागि जिम्मेवार छन्। यस अनुसार सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूको संघ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको औसत तापमान १ 1970 .० पछि दुई डिग्री बढेको छ। यद्यपि यो वृद्धि थोरै देखिए पनि यसको प्रभाव महत्वपूर्ण छ।
पहिलो, वसन्त बर्ष वर्षको सुरूमा आउँदैछ। यस अनुसार राष्ट्रिय वन्यजन्तु संघ, ग्लोबल हिउँ पग्लिरहेका छन् उनीहरूले 50० बर्ष पहिलेको भन्दा अहिले एक देखि चार हप्ता पहिले देखापरेको छ। जब हिउँको हिउँ पग्लन्छ र लहर फुल्न थाल्छ, यसको परिणाम वन हो जो लामो समयसम्म सुख्खा हुन्छ, अन्तत: आगोको मौसम हुन्छ जुन सुरु हुन्छ र पछि अन्त्य हुन्छ।
दुबै क्यालिफोर्नियामा बढ्दो तापक्रम र कम वर्षाले बढ्दो शुष्क मौसममा योगदान पुर्‍याउँछ। परिदृश्य सुख्खा हुने बित्तिकै यसले वन्य आगोको लागि प्रमुख अवस्था सिर्जना गर्दछ। यस अनुसार नेशनल ज्योग्राफिक, बढ्दो तापक्रमको परिणामस्वरूप बोटबिरुवा, माटो र वनस्पतिबाट अधिक पानी तानिन्छ। यो सुक्खा मलबे तब वनको लागि प्राकृतिक ईन्धन स्रोत को रूप मा कार्य गर्दछ। जब यो सुख्खा वनस्पति वर्षाको कमीसँग मिल्छ जुन हामीले क्यालिफोर्नियामा देख्यौं, आगोको खतरा दस गुणा बढ्छ। सुख्खा अवस्थामा, वन्य आगोहरू द्रुत रूपमा फैलिन सक्छ।
वन्य आगो सुरक्षा सल्लाह र सिफारिशहरू
At फ्रन्टलाइन वाइल्डफायर डिफेन्स, हाम्रो उद्देश्य वन्य आगो संरक्षण र मानसिक शान्ति प्रदान गर्नु हो। यद्यपि विस्तारित क्यालिफोर्निया आगोको मौसमको बारेमा सोचाइ डरलाग्दो हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो घर, परिवार र समुदायलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केहि सक्रिय तरिकाहरू छन् तपाईं र तपाईंको प्रियजनहरूलाई क्यालिफोर्नियाको आगो मौसममा सुरक्षित राख्न।
स्पष्ट मलबे। त्यो सम्झनुहोस् कोठा धेरैजसो ज wild्गल आगोको विनाशको प्रमुख कारण हो, र तेज हावाले तिनीहरूलाई सहजै लामो दूरीको लागि बोक्न सक्दछ। तपाईको रूफटप, गटर र भेन्टहरू नियमित रूपमा खाली गर्नुहोस्। यसले इम्बरहरूलाई प्राकृतिक रूपमा ज्वलनशील वनस्पतिहरू प्रज्वलन गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्दछ जुन यी स्थानहरूमा संकलन गर्न सकिन्छ।
सूचित रहनुहोस्। फ्रन्टलाइन वाइल्डफायर रक्षा अनुप्रयोग को लागी उपलब्ध छ Android र आईओएस यस उत्कृष्ट संसाधनले क्यालिफोर्नियालाई फ्रन्टलाइन प्रणाली नियन्त्रण र अनुगमनका अतिरिक्त सक्रिय अग्निबाण ट्र्याकिंगको साथ सूचित गर्दछ।
डिफेनेसिबल स्पेस सिर्जना गर्नुहोस्। यद्यपि शरद orतु वा जाडोको पहिलो प्रमुख वर्षाले सामान्यतया आगोको मौसममा अन्त्य गर्दछ, हामी सँधै वर्षामा भर पर्न सक्दैनौं। यद्यपि हामी सबैसँग सामर्थ्य छ Preemptive सुरक्षा उपायहरु लिनुहोस्जस्तै, एक बर्ष एक गोल बनाए डिफेनेसिबल स्पेस
बाह्य स्प्रिंकलर प्रणाली विचार गर्नुहोस्। यो फ्रन्टलाइन वन्य अग्नि रक्षा प्रणाली एक बाह्य घर आगो स्प्रिंकलर प्रणाली हो जुन तपाईंको घर र सम्पत्तीलाई बायोडिग्रेडेबल फायर फाइटिंग फोमले ढाक्छ। सक्रिय हाइड्रेशन तत्काल तत्कालको खतराले तपाईंको सम्पत्ती उडान कक्षबाट जोगाउँदछ, wild ०% घरहरू अग्निबाणले नष्ट गरेको कारण।
निकासी योजना छ। तपाईंको परिवार र प्रियजनहरूका लागि सँधै एक निकासी योजना तयार गर्नुहोस् घरपालुवा जनावर! प्रत्येक निकासी योजना मा एक तोकिएको बैठक क्षेत्र, एक भागने मार्ग, र संचार को लागी सम्पर्क को एक एकल बिन्दु समावेश गर्नु पर्छ यदि परिवार को सदस्यहरु अलग छ। एक प्रभावी निकासी योजनाको लागि सुरक्षा सामग्री र अन्य विचारहरूको पूर्ण सूचीको लागि कृपया तपाईंको स्थानीय फायर एजेन्सीसँग परामर्श गर्नुहोस्।